Article submitted by: Thunderbolts on 20-Dec-2013
တော်ရုံ တန်ရုံဘဲ ကောင်းပါတယ် ။
တခြားစကားတွေ မပြောခင် သက်ဆိုင်သူကို မေးခြင်တာလေး တခု ၂ ခု လောက် မေးပါရစေ လို.။
လောဘကြီးလှ ချည်လား ၊ ဒေါသ ကြီးလှချည်လား ၊ မောဟ ကြီးလှချည့်.လား၊ တကမ္ဘာလုံး အုပ်ချုပ်ဘို. တော့ စိတ်မကူးနဲ့ နော်၊ ဘိုးတော် တွေ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ (ငါးစာ သာ ပေးမယ် ကွန်ချက်မပြဘူးဆို) တာ သိ လိမ့်မယ် ထင်တယ် ။ ငါ့ သမီးလေး တော်ပါတယ် ဆိုမှ ယောင်းမ မြင်းစီးပြီး မထွက်ပါနဲ့။
မတော်သေးဘူးလား ဆုတွေ၊ လဘ်တွေ၊ ဘွဲတွေ၊ ဂုဏ်ထူးတွေ လယ်ပင်းမှာ လွယ်ထားရင် ကိုယ်ပါ မြေထဲ နစ်သွားလိမ့်မယ်၊ မြေမှာနစ်တယ် ဆိုတာ နားလည် သလား။ အိမ်မှာထားဘို.နေရာမရှိဘူး၊ ပြတိုက် တခု ဆောက်ရ လိမ့် မယ်။ ကျမဖေဖေ့ ပြတိုက်ကိုတော့ ရောသောပြီး မလှူပါနဲ့ ၊ ကျမဟာ ဖေဖေ့ သမီးပေမဲ့ ကျမနဲ့ကျမဖေဖေ နဲ.မတူတာတွေ အများကြီးရှိတယ် ဆို တာ ပြောဘူးတယ် မဟုတ်လား။ တူခြင်သလား အတူမြုတ်ခြင်သလား။ ဆုတောင်းမမှားစေနဲ့နော် ။
သမိုင်းမှာတော့ ၀င်လောက်ပါပြီ အနိုင်နဲ့ ပိုင်းဘို. အချိန်ရောက်ပြီလို.ပြောရင် လက်ခံမလား။ (တသက်လုံး ဖုံးသမျှ ကုန်းတော့မှပေါ်) နာမည်ကောင်း ရ တုန်းနား၊ နာမည်ဆိုးဖြစ်သွားရင် ကျုပ် ရင်ကျိုးရချည်ရဲ့။ ကိုယ် တယောက် ထဲ တနေ.တည်း၊ တထို်င်တည်း လုပ်လို.ပြီးမဲ့ ကိစ္စတွေလဲ မဟုတ်ဘူး။ အရေး ကြီးတာက ကိုယ့် မှာ အသင်း (Good Team) ရှိနေပြီလား ။ အသင်း Team မလိုဘူး ၊ နိုင်ငံခြားက နည်းပြဆရာတွေ ရှိတယ် ငှားလို.ရတယ် လို. ပြောမလား? အလကားရမယ် ဟေ့ လို ဟစ်လိုက်ရင် အိမ်တောင် ပြိုကျသွား အုံးမယ်တဲ့လား ?
ပြောခဲ့ဘူးပေါင်းလဲ များပါပြီ. အခုလဲ ဒီစကား၊ အရင်ကလဲ ဒီစကား၊ နောက်လဲ ဒီစကားတွေဘဲ ပြောရအုံး မယ်ဆိုရင် သိပ်တော့ မနိပ်ဘူး ထင်တယ်။ ဘာလဲ ဆိုတော့ လုတွေရဲ့ အပြောအဆို အနေအထိုင် အပြု အမှူဟာ လူတွေရဲ အဆင့်အတန်း ကို ဖေါ်ပြပါတယ် ။ လူတွေဟာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးဘူး။ နေရာ တကာမှာ ဒေါသရှေ.ထားနေကြဘဲဆိုတာ တွေ.နေရတယ်။ မဖြစ် သင့်တာတွေ ဖြစ်ကြရတယ် ဆိုတာကို တော့ (ကောင်းတယ် မှတ်ရောဟယ်) လို.တော. မပြောနိုင်ဘူး။ ဒို.တတွေအများစုဟာ ဗုဓ္ဒဘာသာတွေ ဆိုတော့ လောဘ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ ဆိုတာတွေဟာ ဘာတွေလဲ ဆိုတာကိုတော့ သိကြတာများပါတယ်၊
(သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ ) လိုပြောရမလား ၊ လက်တွေ မကျင့်နိင်မှုက များနေတယ်ဆိုတာ တွေ.ရတယ် ၊ သာမန်လူတွေဒင်မဟုတ်ပါဘူး။ အာစရီယ ဂိုဏ်းဝင် ဆိုတာတွေ ကလဲ့ ပုထုဇဉ်တွေပါဘဲ။ ဒီလောက်ထိ ပြောရတာတော့ သိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာ သိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ၊ လိုအပ်လို.ပြောတာဘဲ ဆိုတာ လေ.လာသူ တွေ သိကြပါလိမ့်မယ် ။
၂၀၁၀ ခုက ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တက်လာတဲ့ အစိုးရ ဟာ စစ်ရောင်( အစိမ်းရောင်)တွေ သန်းနေတယ်ဆိုတာ မှန်ပါဘဲ။ တချို.က ဆိုရင် သူငယ် တန်း ဖတ်စာမှ ပါတဲ့ စာလေးတောင် ရွက်လိုက်ကြသေးတယ်၊ (မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း တောက်တဲ့ ခေါင်းပေါင်း ပေါင်း ) တဲ့ ။ ဒါ့ကတော ပါတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ အရ အရောင် အမျိုးမျိုးပြောင်း တတ်တဲ့ ပုတ်သင် ကိုတောင် အရောင်မလိုက်တော့ဘဲ ပုတ်သင်ညို လို. တလုံးထဲဘဲ ခေါ်ထားသေးလေ တော့၊ တောက်တဲ့ လို ခေါ်တာဟာ လွန်တယ် မှားတယ် မထင်ဘူး။ တိုက် ရိုက်မဟုတ် သွယ်ဝိုက်တဲ့ နည်းနဲ့ ခေါ်လိုက်တာလဲ ဖြစ်ပါလ်ိမ့် ။
ပြောရမယ် ဆိုရင် ဒို.နိုင်ငံမှာ ပုတ်သင် တွေများတယ် ။ ၀ိဒေဟရစ်မင်းကြီး သဘောကျလို. ရွှေတပဲသား ဆုချခံရလို. ခေါင်းမထောင်နိုင် မငြှိမ့်နိုင်တော့ ပုတ်သင်မ ကြီးလဲ ရှိသေးတယ်။ မှန်ရာကိုပြော မှန်ရာကို လုပ်တဲ့ မဟောသဓ ကို မနာလိုဝတ်တို ပျက်ဆီးအောင်ကြံခဲ့တဲ့ သေနက အမတ်လိုလူလဲ ရှိတယ် ဆိုတာ ၀တ္တုထဲမှာဒင်မဟုတ် တကယ်ရှိနေတယ် ဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ.နေရတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တက်လာတဲ့ အစိုးရကို ၊ ဒိအရင်က စစ်အစိုးရကို စစ်တပ်ကို အမျိုးမျိုး သိက္ခာတွေချခဲ့ သူ က အရှက်ပြေ လိုလို ၊ သူနည်း သူ.ဟန်နဲ့ဝန်
ချတောင်းပန်သလိုလို စကားလုံး ပြောင်းပြီး၊ တချက်ခုတ် ၂ ချက်ပြတ် “ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ တနည်းအားဖြင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေနဲ့ တပ်မတော် ကြား မှာ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေလို. ကျမ ဒီလိုဘဲ ပြောခြင်တယ်” တဲ့ ။ “ တပ်မတော် ကို တရားခံဖြစ်အောင်လုပ် ထား တယ် လို. ကျမ ဒီလိုဘဲ မြင်တယ် ” လို.လဲ ပြောသွားသေးတယ်။ ကျမ မြင် သလို. တခြားသူတွေက တခြား အမြင်တွေ ရှိတာဘဲ ပေါ့ ။
အရိုး တောင်း ပုံလေးက ယဉ်လိုက်ပါဘိ နော် ၊ ဒီစကားဟာအတော်အဓိပါယ် ပါတဲ့ စကားရပ်ဘဲ။ သက်ဆိုင်သူတွေ သိကြပါလိမ့်မယ်၊ သတိရတာလေး ပြောရရင် ၊ ငယ်ငယ်က ကျနော် ဖေဖေ သင်ဘူး တာက တော့၊ ထမင်းဝိုင်းမှာ ဆံလှကြောင်းပြောလာရင်၊ ဆံဈေး မေးလာရင် ၊ နောက်ထပ် ထမင်းလို ခြင် လို. တောင်း တယ် ဆိုတာ သိပါ မှတ်ထားပါ ငါ့ သား တဲ့ ၊ ဒါက လူ.အလိုက်
သိတတ်ဘို. ကျနော်ဖေဖေက သင်ပေးခဲ့တာပါ ။
အခုဒီနေရာမှာတော့ ကျနော် လူ.အလိုက် မသိနိုင်ပါဘူး။ မစုကြည် အကြိုက် မလိုက်နိုင်တာကတော့ အမှန် ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော သူ.ကို ၂၅ နှစ်ကြော်ကြာ လေ့လာခြဲ့ပီမို. သူအကြောင်းသိနေပြီ လိုဆိုကြပါစို.။ ပါးစပ်
ဟရင် သွား ဘယ်နှချောင်း ၊ အူ ဘယ်နှခွေ ရှိတယ် ဆိုတာ မြင်တယ် ၊ ဒါကြောင်.ခက်နေတယ် ။
အရင်က ချက်တဲ့ဟင်း ဆား များသွားလို. အခုချက်တဲ့ ဟင်း ဆားလျှော့
ထည့်တယ် ဆိုရင် မှန်ပါလိမ့်မယ် ၊ ဒီဟင်းကတော ဒီဟင်းပါဘဲ၊ ဒါဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုကြီးဘဲ ၊ မဟာခုန်ပြန်ကျော်လွှားမှုကြီးဘဲ လို.ယူဆ လို.မရပါဘူး။ ဒို.အတွေ အတွက်ကတော ငါးပိ ငံပြာရည် စားသူမို.ဆားများတာ နဲတာကို ပြသနာလုပ်မနေ ပါဘူး ၊ ခေတ်မီတဲ့ အတွေး အခေါ်နဲ့ ပြောရရင် အိုင်အိုဒင်းဆား မသုံးရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို.သိပ္ပံပညာရှင်တွေ
ကေ သူတေသနပြုထားတာ ရှိတယ် ဆိုတာတော့ ထောက်ပြခြင်တယ် ။
စကားဆက်ရရင် ၂၀၀၈ ကရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ တက်လာတဲ့ အစိုးရ ဟာ နေရာ တကာမှာ သွေးထိုးစမ်းးခံရ လိမ့်မယ် ဆိုတာ ကြိုတင်သိတယ် ။ စမ်းလဲ စမ်း ခံ နေရတာဘဲ ၊ အစိုးရဆိုတာ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတို. အကျိုးငှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာမှန် သမျှ လုပ်နေတယ်၊ ဦးစားပေးလုပ်ရမဲ့ လူပ်ငန်းတွေက များ နေတယ်။ တခုပြီးရင် တခု မို. လုပ်ငန်းအားလူံးဟာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချည်း ဘဲ။ လက်မလယ်နိုင်အောင်ရှိနေတယ် ၊ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေကို အာရုံစိုက် လုပ်နေတယ် ။ ဒီ အာရုံတွေ ပျက်အောင် ၀ိုင်းလုပ်နေကြတာတွေကို အစိုးရ သိတယ် ၊ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အစိုးရဟာ ခွေးဟောင်တိုင်းတော့ ထမကြည့် နိုင်ဘူး။ သူဟာနဲသူ တာဝန်ပေးထားသူတွေ က သင့်တော်သလို လုပ်သွား ကြလိမ့် မယ်။ အောင်မြင်မှူတွေ ရှိနေတာလဲ တွေ ရတယ် ။
ဒါကို သိပါရက်နဲ့လက်တွေ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဘို. တော့ စိတ်မကူး ၊ အစိုးရအောင်မြင် မှာ တွေကို မလိုလား ၊ ဒီအတိုင်းဆို ငါ့နာမည် ( မ ကျန်ရစ် )လို.များ ပြောင်းရတော့မှာလား စိုးရိမ်၊ ဒီလို ဆို မဟန်ဘူးဟဲ့ ဆိုပြီး ၀က်မကြီးလို. အအီအီ လုပ်နေတယ် ။ ၀က်သတ်ရုံ.အပိုခံရမယ်နော်။
၂၀၁၅ ခုအတွက် မသေချာလို. ဗျာပါဒတွေ ရောက်နေ သလား။ အားငယ် ကြောက်စိတ် တွေ ၀င်လာနေ သလား၊ စိုးရိမ်သောကမီးတွေ တောက် လောင် နိပ်စက်နေသလား။ အိပ်မပျော် စားမ၀င်ဘူးလား။ ကိုယ် ပြောခဲ့တာ တွေ လွန်ခဲ့လို. ပျားရေနဲ့ ၀မ်းချနေသလား ? ကိုယ်က ပြောခြင်ရင် ကိုယ် လဲ အပစ်မကင်းလို.ဘဲ ကိုယ်ကလဲ မှားပါတယ် လို. ၀န်ခံတာဘဲ ၊ ဒီမှာတင် ရပ်မသွားဘူးနော် ။ ချော.လို.ပြော့ရင်လဲ ပြော.ကြ၊ ပြောရင် အပြော.နှိုက်ခံရအုံးမယ် ။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ Life is suffering , craving is the suffering. You are craving for something, I know you are, everyone knows you are. You need to becomeaSotapann (Saint), which you are not. Then you may becomeaworthy one ( Arahat) . Needless to say, I don’t see anything like that in you. What does your spiritual teacher say? Never mind that, but I will tell you that you are too far away from Nirvana, you are not even at the gate, at this age. Did you remember you had donealot of mischiefs, including you made the people suffer, for what? For want of the power? Peace is within you, with you. If you can’t Rest In Peace, what I would like to say is the older you are, the wiser you must be. That is my advice. Whether you want to go or not, ready or not, when time comes, it will collect you, you have to go. Go with dignity, don’t be pushed out. Remember you pushed out Ne Win?
In Buddhism there is such thing as “ retribution’, sooner or later it will come. When will you start realizing that? You areaBuddhist , are you not, or for political correctness you have given up Buddhism, and becomeanone believer, saying, in politic there is no colour, no race, no religion.